Wararka - Arenti wuxuu ku guuleystay abaalmarinta IF DESIGN AWARD 2021
Hoofddorp, Abriil 13, 2021 - Arenti wuxuu ku guuleystay abaalmarinta IF Design Design AWF ee sannadkan, abaalmarinta naqshadeynta adduunka ee caanka ah. Badeecada guuleysatay, Taxanaha Arenti Optics Smart Home Security Series, waxay ku guuleysatay anshaxa alaabta, kaamerada amniga iyo qeybta albaabka. Sannad kasta, ururka naqshadeynta madaxbannaan ee ugu da'da weyn adduunka, Hannover oo fadhigeedu yahay iF International Forum Design GmbH, ayaa qabanqaabiya Abaalmarinta DESIGN AWF.
Taxanaha Arenti Optics Smart Home Security wuxuu ka guulaystay xeerbeegtida 98 xubnood, oo ka kooban khubaro madax-bannaan oo ka kala yimid adduunka oo dhan, oo leh Naqshad-Aluminium-qaabeysan, 2K Ultra HD Resolution iyo Astaamaha Awoodda Sirdoonka Farshaxan. Tartanka ayaa ahaa mid aad u xoog badan: ku dhawaad ​​10,000 oo galitaan ayaa laga soo gudbiyay 52 dal iyagoo rajeynaya inay helaan shaabadda tayada.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Taxanaha Arenti Optics Smart Home Security waxaa laga heli karaa qaybta "Guuleystayaasha" qaybta iF Hagaha Naqshadeynta Adduunka.
Arenti waa astaanta Nidaamka Amniga Guriga Smart Home ee Arenti Technology, oo ujeedadeedu tahay inay siiso adeegsadayaasha caalamiga ah si ka fudud, aamin ah oo xariif ah alaabada amniga guriga & xalalka leh isku-darka ugu fiican ee naqshadaha goynta, qiimaha la awoodi karo, teknolojiyadda horumarsan & shaqooyinka saaxiibtinimada leh.
Alaabada guriga caqliga leh ee Arenti waxay siiyaan wax -qabadka ugu sarreeya, cimri -dhererka, isku -duubnaanta iyo qiimaha. Dhammaan badeecadaha waa 100% oo ay soo saareen koox R&D u gaar ah oo leh 100+ injineerro oo inta badan ka socda 3 -da kooxood ee amniga adduunka ugu sarreeya, oo ay naqshadeeyeen kooxda naqshadeynta Talyaaniga oo iyaduna u samaysa naqshado Braun, Panasonic, waxaana soo saaray xarun wax -soo -saar oo leh in ka badan 500 oo shaqaale labadaba Netherlands iyo PRC.
Iyada oo xafiiska Yurub laga aasaasay Amsterdam & xafiiska Mareykanka oo laga aasaasay California, Arenti wuxuu isu beddelay mid ka mid ah 10 -ka ugu sarreeya alaab -qeybiyeyaasha kamaradda guriga ee caqliga badan adduunka oo leh 3 milyan oo kombiyuutarro caqli -gal ah oo la iibiyay 2019, 4.5 milyan oo gogo 'ayaa la iibiyay 2020. kaamirooyinka guriga ee caqliga leh waxaa ka mid ah kaamirooyinka gudaha ee heer-galitaan ah iyo kamaradaha batteriga ku shaqeeya ee aadka u sarreeya, gambaleelka fiidiyaha & kaamerooyinka iftiinka daadadka, iyo alaabtoodu waxay la jaan qaadayaan Alexa, Kaaliyaha Google iyo aaladaha kale.
Ku saabsan Abaalmarinta naqshadeynta iF
Muddo 67 sano ah, IF IFNIGA AQOONSIGA waxaa loo aqoonsaday inuu yahay garqaade tayo leh naqshad gaar ah. Calaamadda iF waxay caan ku tahay adduunka oo dhan adeegyada naqshadeynta ee aadka u wanaagsan, iyo iF DESIGN AWARD waa mid ka mid ah abaalmarinnada naqshadeynta ugu muhiimsan adduunka. Soo -gudbinta waxaa lagu abaalmariyaa farsamooyinka soo socda: Badeecadda, Baakadaha, Isgaarsiinta iyo Naqshadeynta Adeegga, Dhismaha iyo Dhismaha Gudaha iyo sidoo kale Khibradda Isticmaalaha Fikradda Xirfadeed (UX) iyo Is -dhexgalka Isticmaalaha (UI). Dhammaan qoraalladii la guddoonsiiyay waxay ku qoran yihiin boggaiF Hagaha Naqshadeynta Adduunka iyo in app naqshadeynta iF.
Waqtiga dhejinta: 13/04/21